Aamusnaanta Dowladda Dhexe iyo go’aanada Maamul Goboleedyada | Codkagalmudug isha Laga Helo Wararka Xaqiiqda
Aamusnaanta Dowladda Dhexe iyo go’aanada Maamul Goboleedyada
Sep 21, 2017 - jawaab
Dowladda Dhexe Somaliya, ayaa weli ka aamusan go’aanada isa soo taraya, ee ay Maamul Goboleedyada kula safanayan xulufada Sacuudiga, ee go’doominta geliyay Dowladda Qatar, xilli go’aanadaasi ay liddi ku yihiin mowqifkii dhexdhexaadnimada ee Dowladda Somaliya.
Inta badan Maamul Goboleedyada, ayaa ka horyimid in dhexdhexaad laga noqdo arrintaasi, loona baahan yahay in lala safto Sacuudiga iyo Emirate-ka Carabta, haddii sida ay sheegeen ay dadka Somaliyeed wax badan u qabteen.
Maamulada Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Madaxweynihii hore ee Maamulka Hirshabelle, Cali C/laahi Cosoble, ayaa qaadacay mowqifka dhexdhexaadnimada ee Villa Somalia, waxayna ku sheegeen mid aan iyagu waxba laga weydiin.
Iyadoo Dastuurka uu ku cadyahay in Dowladda Dhexe ay u madax bannaan tahay siyaasadda arrimaha dibadda, haddii ay noqon laheyd dalalka deriska iyo kuwa kalaba, ayay hadana dowladdii noqotay mid juuqda gabtay.
Shacabka Somaliyeed oo ka walaacsan in la mucaarado mowqifka dowladda, ayaa la’ aaminsan yahay inay Madaxda Qaranka ku taageeri lahaayen go’aankooda, haddii ay waxba kama jiraan ku sheegi lahaayen go’aanada khalafsan ee Maamul Goboleedyada.
Qodobo dastuuri ahi, ayaa qeexaya inay tahay in Dowladda Federaalka looga dambeeyo difaaca dalka, muwaadinimada iyo go’aanada arrimaha dibadda, ayna tahay midda keliya ee awoodda u leh inay mowqif ka qaadan karto.
Qodobka 54-aad ee Dastuurka wuxuu leeyahay “In awoodda arrimaha dibadda, difaaca, muwaadinimada iyo lacagta ay iska leedahay Dowladda Federaalka Somaliya.”
Dadka odoroso siyaasadda Somaliya, ayaa waxay qabaan in Emirate-ka uu u qalab qaatay, sidii uu khilaaf kaga dhex bilaabi lahaa Dowladda Madaxweyne Farmaajo iyo Maamul Goboleedyada, haddii ay dowladiisu diiday inay taageerto go’doominta dowladda yar ee Qatar.
Sacuudiga, Emirate-ka, Masar & Baxrayn, ayaa saluugay hankii Villa Somalia ay ku diiday in Wadamada Carbeed ee is haya, ay garab ka mida la safato, waxayna Somaliya sheegtay inay ku biireyso dalalka ka shaqaynaya, sidii wadamadaasi la isugu keeni lahaa.
Waxaa wax lala yaabo noqotay sababta ay afartaasi dal u kala qub qubayaan Somaliya, maadaama ay jiraan dalal kale oo dhexdhexaad ka noqday xiisadda Khaliijka, hadana aysan ugu samaynin wax fara-gelin ah